Archive du 20190923
Olom-pirenena mandray andraikitra Andiana tanora nanadio ny moron-dranomasina
Vondrona tanora vitsivitsy monina ao Toamasina I no tonga saina sy resy lahatra fa zava-dehibe ny fahadiovana.
Ankadifotsy Noraisim-potsiny tao an-tranony ilay vehivavy mpisoloky
Noraisim-potsiny tao an-tokantranony ilay tovovavy 25 taona izay nivadi-pitokisana tamin’ny renim-pianakaviana mifanila vodirindrina azy nisamborany vola mitentina 4 tapitrisa ariary.
Kariera ao Ikalamavony Manara-dalàna izahay, hoy ny tompony
Lainga ary diso tanteraka ny filazana fa nisy ady sy fikasihan-tanana niteraka vono sy naharatrana olona tao amin'ny vohitr'i Befitsiotsy misy kariera ao Ikalamavony, hoy ireo tompon’io kariera io.
Fifanintsanana CHAN 2020 Ambivitra no nandresen’ny Barea an’i Namibie
Ambivitra dia ambivitra fa efa tany amin’ny minitra faran’ny ora fanampiny (90’+3) vao nahatafiditra baolina tao amin’ny haraton-dry zareo Namibiana ny Barea Malagasy, omaly
Andoharanofotsy Maty voahitsaky ny fiara ilay zaza nilalao amoron-dalana
Rehefa ho tonga tokoa ny loza dia tonga. Ankizy nisangisangy teny an-tsisin’arabe no voahitsaky ny fiara 4x4 iray teny Andoharanofotsy ny sabotsy lasa teo.
Tandindomin-doza ny fiarahamonina Mpisotro toaka ny 77%-n’ny Malagasy
Mampivarahontsana ny nandre ny tarehimarika : Malagasy 3 amin’ny 4 no misotro toaka, izany hoe 77%-n’ny Malagasy. Mitambatra ao avokoa rehefa zava-pisotro misy alikaola.